Bishaar Abshir “Waxaan qiimeyn ku sameynay ciidamada ka howlgala degmooyinka gobolka..” – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Bishaar Abshir “Waxaan qiimeyn ku sameynay ciidamada ka howlgala degmooyinka gobolka..”
Iyadoo muddooyinkii ugu dambeysay ay magaalada Muqdisho ka jireen amni xumo baahsan islamarkaana ay haatan soo dhaw-dahay xilligii la qaban lahaa doorashada dalka ayaa si arrintaasi wax looga qabto waxaa go’aan cad kasoo saaray taliska booliska ee gobolka Banaadir.
Bishaar Abshir Geedi oo ah taliyaha booliska gobolka Banaadir oo warbaahinta Muqdisho la hadlay ayaa shaaciyay in la diyaariyay qorshe cusub oo dhinaca ammniga ah lagu sugaayo magaalada Muqdisho, xilliyada ay socdaan doorashada dalka.
Wuxuu taliyaha sheegay in ciidamada booliska ee gobolka Banaadir ay si dhameystiran ugu diyaar garoobeen sugidda amaanka gobolka, xilliga ay dhacayaan doorashooyinka, ayna wadaan iskaashi ay gobolka Banaadir la leeyihiin sidii amniga degmooyinka gobolka Banaadir loo xaqiijin lahaa.
“Waxaan haatan diyaarinay ciidan si gaar ah u xaqiijiya sugida ammaanka magaalada Muqdisho, xilliyada ay dhacayaan doorashooyinka dalka, waxaan qiimeyn ku sameynay ciidamada ka howlgala degmooyinka gobolka, runtii si wanaagsan ayaan u diyaar garownay” Sidaas waxaa yiri taliyaha ciidanka booliska gobolka Banaadir Bishaar Abshir Geedi.
Dhinaca kale, degmooyin ka tirsan magaalada Muqdisho ayaa habeenkii xalay waxaa ka bilaawday howlgalo baaritaan ah, waxaana qeybo badan oo ka mid ah magaalada habeenkii xalay lagu arkaayay ciidanka booliska oo xiray qaar ka mid ah xaafadaha ku yaala degmooyinka Muqdisho.